Compendium na-ebupụta Enterprise Editor Calendar | Martech Zone
Compendium na-ebupụta Kalịnda Ederede Enterprise
Thursday, August 16, 2012 Sọnde, Septemba 8, 2013 Douglas Karr
Ọ bụrụ na ị bụ nnukwu ụlọ ọrụ nwere ọtụtụ ndị edemede, na-ebufe ọdịnaya niile, oge na nkwalite nwere ike ịbụ usoro siri ike ijikwa. Ngwakọta ulo oru ihe nchịkọta akụkọ ezi a mgbe gara aga ma budata enwekwukwa ya na ụfọdụ oké enterprise atụmatụ:
Mmekọrịta Social Media - A na - egosipụta mgbasa ozi mgbasa ozi gị niile na kalenda maka nyocha dị mfe na usoro ihe omume. Ọ bụrụ n ’mkpọtụ karịrị akarị, ị nwere ike ịzobe nkwalite ahụ n’oge ọ bụla.
Onye Nzipụta Nzipụta - Ndị edemede gị niile nwere ohere kalenda na usoro isiokwu kwa ụbọchị. Ha enweghị ike ịme mgbanwe ọ bụla ma ọ bụ dezie na oge a, mana anyị nwere olile anya na ọhụhụ a na-eme ka nkwukọrịta nke usoro nchịkọta akụkọ zuru oke dị n'etiti otu gị.
Gburugburu Kwa .bọchị - Duzie ndi ode akwukwo gi ma hazie atumatu ederede gi site n’inye ha isiokwu ma obu isi okwu ubochi. E nwere ike ịtọọ gburugburu gburugburu iji reoccur kwa ụbọchị, kwa izu ma ọ bụ kwa ọnwa.
Dọrọ & Dobelata Nhazi oge - Chọpụta ọdịiche na usoro ọdịnaya gị? Dụpụta ihe ederede na-enweghị usoro site na sidebar n'ime oghere oghere na kalenda gị. Nwere ike imeghari oge nkwado n'ọha mmadụ.
Kalinda Mbupu & ringkekọrịta - Kalenda maka posts na nkwalite mmekọrịta mmadụ na ibe ya nwere ike ibupụ ma kesaa na kalenda ndị ọzọ dị ka Kalịnda Google, iCal ma ọ bụ Kalịnda Outlook. Enwere ike ịnye URL ndị ọzọ na kalenda kalenda ndị ọrụ na ndị ọrụ maka ọhụhụ ka mma n'ime arụmọrụ ahịa ọdịnaya gị.
Nzacha & Imeziwanye Nhazi - Anyị emeela mgbanwe dị ịrịba ama na nhazi nke kalenda ahụ, gụnyere mgbakwunye nke ọnọdụ ọdịnaya na nzacha ntanetị mmekọrịta. Inweta nnyocha nlere anya nke usoro nchịkọta akụkọ gị adịtụbeghị mfe.
Compendium bụ usoro ịzụ ahịa ọdịnaya na-enyere ndị otu aka ijide ma mepụta ọdịnaya mbụ na ụlọ ahịa aha maka ikesa ọwa ahịa ọ bụla. Ngosipụta: Enwere m oke na Compendium, rụọ ọrụ ebe ahụ ma nye aka ịmalite ụlọ ọrụ ahụ.
Malite endlọ Ahịa Facebook na VendorShop